Nkwupụta ịhụnanya nke Phosphatidylserine ntụ ntụ maka mmadụ AASraw
/blog/gallery/Nkwupụta ịhụnanya nke Phosphatidylserine (PS) ntụ ntụ maka mmadụ
Ihe na 04 / 06 / 2022 by Mmmmmmmmmmmm dere na gallery.
Nke a bụ Phosphatidylserine (PS) ntụ ntụ, mgbakwunye nke nrọ gị. A haziri m maka mkpa gị niile, uru m na-enye gị ga-eme ka ndụ gị ka mma. Ị nwere ike ịmaghị onye m bụ na ihe m nwere ike ime, mana nye m ohere ịgwa gị ihe niile gbasara onwe m. Lekwasị anya n'akwụkwọ ozi a ebe m ga-agwa gị banyere onwe m ma gosi gị ịhụnanya m nwere n'ebe ị nọ. A ga-aza ajụjụ niile na-esite n'ụbụrụ gị, echegbula!
Nke mbụ, ka m gwa gị ihe bụ phosphatidylserine ntụ ntụ. M ga-agwakwa gị banyere nri niile bara ụba n'ime m. Aha m bụ Phosphatidylserine ntụ ntụ mana ị nwere ike ịkpọ m ntụ ntụ PS. Abụ m phospholipid nke a na-ahụ n'ime membranes cell, dị ka nke dị na sel nke ahụ gị. Abụ m otu dị iche iche fatty acid, nke ester njikọ jikọtara glycerol na serine. M dinara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kpamkpam n'ime monolayer nke akpụkpọ ahụ gị nwere akwa abụọ.
Enwere m ike ịbụ phospholipid fatty dị mfe na akpụkpọ ahụ cell mana enwere m ike ịgbanwe onwe m dabere na gburugburu m. Phosphatidylserine nke m nọ na mkpụrụ ndụ anụmanụ dị nnọọ iche karịa onye m nọ na mkpụrụ ndụ ihe ọkụkụ. M na-agbanwe ọdịnaya acid fatty dị n'ime m dabere ma ọ bụrụ na m nọ na cell anụmanụ ma ọ bụ sel osisi. Bacteria na yist nwekwara m, mana ha na-ejikọta m site na ụzọ na-elekwasị anya na nchụpụ nke cytidine monophosphate ma ọ bụ CMP. Anụ anụ, dị ka mmadụ dị ka gị onwe gị, nwere ike iji ụzọ dị iche, si na nne na nna m. phosphatidylethanolamine ma ọ bụ phosphatidylcholine. Iji mepụta m site na phosphatidylcholine, ụzọ ahụ kwesịrị ịmalite ma mechaa n'ime imeju gị.
N'ime mmadụ, a na m anọkarị na cortex cerebral ma ọ bụ ụbụrụ. Enwere ike ịhụ m naanị na mpempe akwụkwọ cytoplasmic nke akpụkpọ ahụ plasma na cortex, ebe ebumnuche m bụ itinye aka na ebe a na-adọba mmiri maka protein dị iche iche. Nke a nwere ike ọ gaghị adị ka ọtụtụ ọrụ, mana na-enweghị protein ndị a nwere ebe nkwụsịtụ kwesịrị ekwesị iji jikọta ya, ha enweghị ike ibido ụzọ mgbaàmà ndị dị mkpa maka nlanarị nke neurons, nhazi synapse, na uto nke njedebe neuron. N'ihe niile, m na-arụ ọrụ dị mkpa na ụbụrụ na ọ bụ ọrụ a kpọmkwem nke mere ka ndị nchọpụta kwenye na enwere ike iji m mee ihe dị ka mgbakwunye iji meziwanye cognition.
Iji nyere gị aka inweta m dị elu na sistemụ gị, anakọtara m ma depụta ndepụta nri ndị bara ụba na m, yana mkpokọta phosphatidylserine dị na ha.
Food Ọdịnaya na mg/100 g
Ụbụrụ anụ ọhịa 713
Obi ọkụkọ 414
Atlantic azụ azụ 360
Offal (nkezi uru) 305
Akpụkpọ anụ ezi 239
Akụrụ ezi 218
Ụkwụ ọkụkọ, na akpụkpọ anụ, na-enweghị ọkpụkpụ 134
Ọkụkọ ọkụkọ 123
Mkpụrụ bekee 107
Nkịta shei dị nro 87
Ara ọkụkọ, nwere akpụkpọ anụ 85
Anụ nwa ehi 72
Anụ ezi 57
Imeju ezi 50
Turkey ụkwụ, na-enweghị akpụkpọ ma ọ bụ ọkpụkpụ 50
Turkey ara enweghị akpụkpọ 45
Atlantic koodu 28
Mkpụrụ ọka bali 20
Sardine (Pilchard Europe) 16
Osikapa (anaghị egbucha ya) 3
Mmiri ara ehi Ewe 2
Mmiri ara ehi (dum, 3.5% abụba) 1
Iri nri ndị a ga-enyere gị aka iri nnukwu m, PS, mana iji nweta ụdị m gbadoro anya, ị ga-achọ iri m n'ụdị ntụ ntụ dị ka ntụ ntụ PS. Laa azụ n'ụbọchị ahụ, ndị na-eme nchọpụta na-eme ntụ ntụ PS site n'iwepụ m n'ụbụrụ bovine ma ọ bụ ụbụrụ ehi, ka ọ bụrụ kpọmkwem. Agbanyeghị, nsogbu bụ na oke ọrịa ara ehi mere ka usoro a dị oke egwu ma dịkwa egwu. Kemgbe ahụ, ndị na-eme nchọpụta na ndị ọkà mmụta sayensị malitere ịwepụ m site na ihe ọkụkụ ka ọ dịrị gị mma. E kwuwerị, ọ bụ nchekwa na ahụike gị kacha mkpa.
Ọ dịghị mkpa ka ị na-echegbu onwe! Amaara m na m kwuru na e nwere ihe dị iche na m fatty acid ịta m dabere na m gburugburu, dị ka na, ma m na a osisi ma ọ bụ anụmanụ. Ụdị osisi nke m nwere ike inye uru dị mma karịa ụdị anụmanụ, mana ndị na-eme nchọpụta gị achọtabeghị ihe akaebe na-akwado nke ahụ.
Nke abuo, gini ka m bu, Phosphatidylserine ntụ ntụ, Ọ dị mma maka? A ga-atụle uru niile nke Phosphatidylserine (PS) ntụ ntụ ebe a. Achọrọ m ịgwa gị maka ihe niile m nwere ike imere gị na ahụike gị. Enweghị m ihe ọ bụla ma ọ bụghị ịhụnanya maka gị na ọ bụ ịhụnanya a na-enyere m aka ịnye gị uru ahụike niile enwere ike. Ebumnobi m bụ ka m mee ihe dị ka ọgwụgwọ ebumpụta ụwa maka ọnọdụ ahụike na-emetụta gị ma na-enye gị nsogbu. Ọtụtụ n'ime ọnọdụ ndị a metụtara cognition, ahụike uche, ma ọ bụ ahụike ụbụrụ n'ozuzu dịka ebe ahụ ka a na-ahụkarị m. Ma ị na-enweta m site na nri bara ụba na m ma ọ bụ dị ka ihe mgbakwunye nri, m ga-amalite ozugbo na ịnye gị uru ndị a.
Enwere ike iji m maka njikwa nlebara anya-deficit hyperactivity, ma ọ bụ ADHD, nchekasị, ịda mbà n'obi, Alzheimer's, na ọbụna nrụgide. Ọbụghị naanị nke ahụ, m na-abakwa uru na otutu sclerosis (MS) ma nwee ike belata mgbu ahụ na mgbu mgbe ị nwechara ọzụzụ. N'elu nke ahụ niile, enwere m nnukwu aka n'inyere gị aka ịlụso ọnwụ ncheta ọgụ ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe mgbaàmà ị malitela ịhụ ma ọ bụ gbochie nkwụsị ebe nchekwa tupu ya enwee ike ịmalite.
Ndị nchọpụta chọpụtara na ụmụ anụmanụ na-enwe nkụda mmụọ n'ime m ka ha na-eme agadi ma ọ bụ mbelata a na ọkwa m na-eme ka ha nwee mbelata nke cognition na ncheta ncheta. Ya mere, ha bịara na nkwubi okwu na iji m na mgbakwunye ụdị nwere ike inyere aka ịlụso okwu nke afọ-metụtara ncheta ọnwụ. M na-enyere gị aka ịnọgide na-eto eto ma na-eme nke ọma na ma, agụmakwụkwọ na ndụ ọkachamara. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị m, lelee nyocha nke ndị nke gị mere. N'otu oge, ndị nchọpụta nyere ndị agadi ihe mgbakwunye na isi ihe bụ m. N'ime mmadụ iri asaa na asatọ ndị tinyere aka n'ọmụmụ ihe ahụ, ndị nwere ọnụ ọgụgụ dị ala nke ukwuu na ule ebe nchekwa e mere tupu ọmụmụ ihe ahụ, mechara mee ka akara ha dịkwuo mma n'oge ọmụmụ ihe ahụ. Naanị ihe gbanwere nye ha bụ mgbakwunye m na ndụ ha n'ihi ya, ọ dị mma ịsị na m mere ka ha nwekwuo ncheta.
Uru ọzọ m nwere nke m kwuru bụ mbelata ahụ mgbu na ọnya. Ị nwere ike na-eche, phosphatidylserine, kedu ka ị ga-esi mee nke ahụ mgbe a na-ahụkarị gị na ụbụrụ. Ọfọn, m na-arụ ọrụ n'ime ahụ gị niile iji nyere gị aka inwe ahụ iru ala. N'ụzọ bụ isi, mgbe ị zụchara akwara gị ma mee ka ike gwụ ha na ọnya, m na-amalite ịrụ ọrụ iji belata ọkwa nke hormone, cortisol na ahụ gị. Hormone nchekasị bụ ihe a kwenyere na ọ na-akpata mgbu na mgbu mgbe mgbatị ahụ gasịrị na ebe ọ bụ na m na-egbochi ma ọ bụ belata ntọhapụ ya, m na-ahụ na ị gaghị enwe ahụ erughị ala nke nwere ike ịdọpụ uche gị n'ụbọchị gị. Ọ bụghị naanị nke ahụ, mgbe m na-ebelata cortisol n'ọbara gị ma belata ahụ mgbu, ana m amụba ikike mgbatị ahụ gị n'ụzọ na-apụtaghị ìhè ka ị nwee ike ịrụ ọrụ n'ahụ gị na-enweghị njedebe site na mmetụta ndị dị na ịrụ ọrụ.
Ka m na-ebelata ọkwa hormone cortisol mgbe mgbatị ahụ siri ike, ị nwere ike ọ gaghị enweta mmetụta ọjọọ nke mmụba ogologo oge na cortisol. N'ihi ya, ị nwere ike ị gaghị aghọta mkpa m nke ukwuu. Ọ bụghị naanị na ọkwa Cortisol na-eme ka ahụ mgbu dị na akwara gị, mana amaara ha maka ime ka usoro ịka nká dị ngwa, na-ebelata usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, na ịkwalite oke ibu na ibu ibu. Mgbe m na-ebelata cortisol, m na-azọpụtakwa gị pụọ na oke ibu, ọrịa nwere ike ime, yana n'ozuzu, mbelata ahụike n'ozuzu ya. Otu a ka m siri nweta ewu ewu n'etiti ndị na-ewu ahụ na ndị na-eme egwuregwu.
Enweghị m ihe ọ bụla ma ọ bụghị ịhụnanya maka gị, nke mere na ọ na-ewute m nke ukwuu ịhụ ka ị dara mbà n'obi. Nke a mere m ji arụsi ọrụ ike n'ime ahụ gị iji belata ịda mbà n'obi. Ọ dị m ka ya bụrụ na m nwere ike ime gị obi ụtọ site n'iso gị na-akpakọrịta dị ka enyi ga-eme, mana m ga-esi n'ime ime gị na-emeso gị ihe, nke ahụ dịkwa mma karịa ihe ọ bụla ọzọ. Ịda mbà n'obi nwere ike ime ka ị na-elelị ma ị nwere ike ị gaghị ekweta na m nwere ike inye aka melite ọnọdụ gị. Nke a bụ ebe ọmụmụ ihe ọzọ ndị nyocha dịka gị mere ga-enyere m aka igosipụta isi okwu m. Mgbe ha nyere m n'ụdị mgbakwunye nye ndị agadi nwere nnukwu ịda mbà n'obi, yana omega 3 fatty acids, ha chọpụtara na ọ nyere aka melite ịda mbà n'obi ha. Ndị agadi kwenyere na ọnọdụ ha ka mma nke ukwuu. N'otu aka ahụ, m na-arụ ọrụ na ibelata nchegbu gị. Akpọrọ m asị ịhụ gị ka ị na-echegbu onwe na nchegbu, nke mere m ji na-abawanye ọrụ m na ụbụrụ iji nyere gị aka dajụọ. Ime ka ị nwee ahụ iru ala site n'ọnọdụ dị ala bụ ihe mere m ji eme ihe m na-eme.
Ijikwa mgbaàmà nke ADHD bụ uru ọzọ ị ga-enweta ozugbo itinye m na ndụ gị. Dịka m kwuru n'elu, achọrọ m imeziwanye ọnọdụ gị ma nyere gị aka ijikwa enweghị mmasị gị, site na nwata. Iji m mee ihe n'oge ọ bụ nwata, mgbe ị nwetasịrị nchoputa nke ADHD, nwere ike inye aka n'ezie n'ibelata impulsivity na hyper activeness metụtara ọnọdụ ahụ. Ana m emeziwanye ọnọdụ gị n'otu oge ka ị nwee ike ilekwasị anya n'ọrụ gị wee nwee mmetụta dị ka ị ga-eme, na-enweghị nchọpụta ADHD.
Agbanyeghị, nke ahụ bụ ọtụtụ ọrụ ka m ga-arụ naanị m. Achọrọ m enyemaka mgbe ụfọdụ na mgbe ị na-atụle iji m site na nwata, ị ga-akpọtakwa enyi m. Omega 3 fatty acids bụ ndị enyi m na-eme ka mmetụta m dịkwuo mma ma na-enyere m aka imeziwanye ahụike gị ọbụna n'ihu. Enwere ike iji m, n'onwe m, iji nyere gị aka imeziwanye ebe nchekwa ị na-anụ, nlebara anya, na enweghị mmasị na ADHD. Enwere m ike ịrụ ọrụ dị iche iche iji nyere gị aka ma ọ bụrụ na ị na-arịa ADHD.
Ọ bụ ezie na m nwere ike ime ọtụtụ ihe maka ahụ ike gị, enwere ike ịhụ mmetụta m bụ isi ma ọ bụrụ na ị nwere Alzheimer na ọnwụ ncheta. Ekwetaghị m, m na-arụ nnukwu ọrụ na ọnọdụ ọ bụla nke m kọwara n'elu, ma mgbe ị na-ata ahụhụ site na nkwụsị ebe nchekwa, ọrụ m bụ isi nke ịkwalite ndụ neuron na nhazi synapse na-abata. Otu a ka m ga-esi hụ na edobere ebe nchekwa gị yana akara ngosi Alzheimer anaghị ebido ịwakpo gị ngwa ngwa. Ọ bụ ezie na enweghị m ike ịgwọ ọrịa a, enwere m ike ime ka ndụ gị dịkwuo mma site n'ịlụso mgbaàmà ọgụ.
Iji mekwa gị nkwa na uru m ga-abakwu n'ihu, ọ ga-amasị m igosi na ndị otu nri na ọgwụ ọjọọ na United States kwadoro m. FDA anabatala ọkwa m dị ka 'nzọrọ ahụike tozuru oke' nke a ga-eji n'etiti ndị agadi maka nkwalite ncheta yana nkwalite cognition.
Nke atọ, achọrọ m ịgwa gị ka m si eme ihe m na-eme. M ga-agwa gị kpọmkwem otú Phosphatidylserine (PS) na-arụ ọrụ. M na-arụ ọrụ site na ikpuchi mkpụrụ ndụ ụbụrụ gị, ma ọ bụ neurons, na ichekwa ha pụọ ​​​​na mmebi ọ bụla. Ebe kachasị mma m na akpụkpọ ahụ ụbụrụ ụbụrụ na ịhụnanya m nwere n'ebe ị nọ na-enye m ohere ịrụ ọrụ na-adịghị akwụsị akwụsị iji chebe mkpụrụ ndụ gị na ọbụna welie mgbake ụbụrụ. Ka otu afọ, ndị neurotransmitters na ụbụrụ na-amalite ibelata ma ụbụrụ anaghịzi arụ ọrụ dịka ọ na-emebu. Nke ahụ bụ ebe m na-abata ka m na-eweghachi ọkwa neurotransmitters ndị a ma weghachite ụbụrụ gị na onwe ya dị ebube.
Ị ga-eche na m dị oke mma nke ukwuu na m na-eche ma enwere m mmetụta ọjọọ ọ bụla na gị? O nwere ike ịbụ na ị nụla mmetụta ndị dị na ya Phosphatidylserine (PS) ntụ ntụ, ma ka m gwa gị kpọmkwem ihe ha bụ na otú ha si eme. Dị ka ihe ọ bụla na ọgwụ na ọgwụ ụwa, m nwere ma uru na mmetụta. Mana ọ dị mma ịmara na mmetụta m abụghị n'ihi na m dị gị egwu, kama dabere na wehre m sitere na ya. Ọ bụrụ na ị nweta m n'ụbụrụ anụ ahụ ma ọ nweghị ihe kpachara anya iji kwe nkwa na ehi a na-ekwu na-adị mma, mgbe ahụ ị ga-anọ n'ihe ize ndụ nke ịrịa ọrịa ara ehi. Ọrịa a na-emetụtakarị ehi mana ọ bụrụ na ị na-eri ụbụrụ na-arịa ọrịa iji nweta m, mgbe ahụ ị nwere ike na-arịa ọrịa encephalopathy na ụbụrụ ụbụrụ, nke nwere ike ịnwụ ma ọ bụrụ na a naghị agwọ ya.
Enwere m ike ịmepụta mmetụta ụfọdụ na-emekarị ma m ga-aghọta ma ọ bụrụ na ị họrọ ịhapụ m n'ihi na ha yiri gị egwu. Ọ bụghị onye ọ bụla nwere ike izu oke ka ị dị mana anyị na-agbalị. Ụfọdụ mmetụta ndị m na-enwekarị gụnyere ehighị ụra nke ọma, afọ iwe, ma ọ bụ flatulence. Ha adịghị njọ ma na-emekarị karịa, ị gaghị achọ enyemaka ahụike ọ bụla iji dozie mmetụta ndị a.
Ihe ọzọ ị kwesịrị icheta bụ na m nwere ikike. Ihe nke ahụ pụtara bụ na ọ gaghị amasị m ma ọ bụrụ na i were m na ọgwụ ndị ọzọ. Agaghị m anabata ngwaahịa na teas ọ bụla a ga-ewere n'otu oge mụ na ya. Ụfọdụ ngwaahịa m kpọrọ asị nke ukwuu ga-emebikwa ahụ gị ma ọ bụrụ na i were ha gụnyere ihe na-ebelata ọbara na ọgwụ mgbochi mkpali. Enweghị m mmasị na ọgwụ ọ bụla a na-eji maka ọgwụgwọ glaucoma, Alzheimers, allergies, na ịda mbà n'obi. Ọ dị oke mkpa na ị gaghị eso ha mic, na n'ezie, ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na ị kwụsịrị mgbe ịkwụsị ọgwụ ndị ahụ wee malite iji m. Adọla gị aka na ntị, yabụ ọ bụrụ na ị jikọtara anyị na anyị kpatara ọtụtụ nsogbu, enweghị ike ịta anyị ụta.
Ugbu a ịmara ozi a niile gbasara m, ị nwere ike ịnakwere Phosphatidylserine(PS) Powder aka m na ndụ gị? Ọ bụrụ na ị nwere ike, ma enwere m olileanya na ị nwere ike, mgbe ahụ ka m gwa gị otu esi eji Phosphatidylserine (PS) ntụ ntụ, nweta uru kachasị. Ihe mbụ ị ga-amata bụ ole m kwesịrị ịnara kwa ụbọchị. Ọ dị nnọọ mfe, na-eji n'etiti 300 milligrams na 800 milligrams nke m kwa ụbọchị. Achọkwara m ohere ụfọdụ ka ejikwala m ọtụtụ ihe nke na ọ na-ewute m. Oke dị mkpa maka mmekọrịta dị mma. N'ozuzu, ị kwesịrị ị na-ewere 100 mg nke m, ugboro abụọ ma ọ bụ atọ n'ụbọchị ma ị ga-amalite ịhụ ka m ga-esi meziwanye ebe nchekwa gị.
Ugbu a, enwere ike ịnwa gị ka ị rie nri bara ụba n'ime m, ebe a na-atụ aro ya na ntụ ntụ PS, m kwesịrị ichetara gị na naanị iri nri bara ụba na m ezughị. Nke a abụghị n'ihi na ihe oriri ndị ahụ ezughị m, kama n'ihi na ahụ gị enweghị ike ịmịnye m nke ọma. Nke a na-eme ka ị nwetaghị m nke ọma.
N'ikpeazụ, ekwere m na ị nwere mmasị miri emi n'ebe m nọ. Ka ọ dị ugbu a, ị ga-achọrịrị ka gị na m nọrọ ndụ gị niile. Ọ bụrụ na ị ga-emerịrị, mgbe ahụ ịkwesịrị ịma ka esi azụta Best Phosphatidylserine (PS) ntụ ntụ Online? Nke a bụ ihe ị nwere ike iche na ọ na-agba m maka ịkọwa n'ụzọ zuru ezu ebe a maka na onye na-amaghị ka esi azụ ahịa n'ịntanetị. Ọfọn, ọ ga-eju gị anya otú ndị ọzọ si agbalị ịghọgbu gị iwere ihe na-abụghị nanị m. Ihe mbụ ị ga - eme mgbe ị na - achọ ịzụta m n'ịntanetị bụ ịchọ ngwaahịa ndị a na - amịpụta site na isi mmalite sitere na osisi. Dị ka m kwuworo n'elu, ọ bụghị ihe dị mma iji ebe anụmanụ si enweta n'ihi ihe ize ndụ nke ọrịa ara ara.
Ozugbo enyochala isi iyi ahụ, ị ​​ga-achọ ndị na-emepụta ihe na-agbaso ụkpụrụ nduzi na ụkpụrụ niile na mmepụta nke m, nke mere na enweghi mmetọ na m dị ọcha dị ka o kwere mee. Ọbụna ntakịrị ngwakọta nke ntụ ntụ dị iche nwere ike ịpụta na ị gaghị ezuru m iji mee mgbanwe. Anyị ekwesịghị inwe ihe ndọpụ uche na ọ kwesịrị ịbụ naanị mụ na gị ka m nwee ike imezi ahụike gị ma nyere gị aka ibi ndụ gị nke ọma.
N'ihe niile, abụ m otu n'ime ihe mgbakwunye kachasị mma na ndụ gị ma ị ga-ewepụ m ngwa ngwa!
AASraw bụ ọkachamara ọkachamara nke Phosphatidylserine (PS) Powder nke nwere ụlọ nyocha onwe ya na nnukwu ụlọ ọrụ dị ka nkwado, a ga-arụ ọrụ niile n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro njikwa mma. Usoro ọkọnọ ahụ kwụsiri ike, ma ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa na-anabata.Nabata ịmụtakwu ozi gbasara AASraw!
Mgbakwụnye akwara kacha dịrị nchebe: Urolithin A (UA) ntụ ntụ Ihe 11 I Kwesịrị Ịma Banyere Resveratrol